Kungani Ukumaketha Kwangempela Kwesikhathi Kubaluleke Kakhulu Ku-COVID Era | Martech Zone
NgoMgqibelo, Okthoba 10, 2020 NgoMsombuluko, Januwari 18, 2021 UHannah O'Brien
Kuqinisekisiwe ukuthi iSuper Bowl yaminyaka yonke yase-United States idinga ngaphezulu 11 amahora ayizigidi ezingama-kilowatt yamandla okuqhuba umdlalo qala ukuqeda. Umkhiqizo we-Snack u-Oreo ubelinde cishe iminyaka emibili okwamanje lapho kungewona wonke amandla wezigidi ezingama-11 zama-kilowatt azosebenza ngempumelelo futhi kuzoba nokucima ugesi; ngesikhathi esifanele ukuthi umkhiqizo wenze i-punchline yabo.
Ngenhlanhla yenkampani yamakhukhi, eminyakeni edlule eSuper Bowl XLVII, ekugcineni kube khona ukungasebenzi kahle kukagesi okuholele ekuphelelweni kukagesi enkundleni. U-Oreo uchofoze ukuthumela kokulungiselelwe kwabo Tweet futhi walinda ukubandakanyeka.
Ukuphela kwamandla? Ayikho inkinga. pic.twitter.com/dnQ7pOgC
- Ikhukhi le-OREO (@Oreo) February 4, 2013
Ekupheleni kweSonto ebusuku, i-akhawunti ka-Oreo ye-Twitter yamukele abalandeli abalinganiselwa ku-8,000 futhi yabhalwa kabusha izikhathi ezingaba ngu-15,000 2,200, i-akhawunti yabo ye-Instagram isuke ekubeni nabalandeli abangu-XNUMX XNUMX kuya ngaphezulu 36,000, futhi wathola cishe ukuthandwa okungu-20,000 XNUMX ku-Facebook. Ekugcineni, isu lika-Oreo libe yimpumelelo futhi labonisa indlela enhle yokumaketha kwesikhathi sangempela.
Ukumaketha Ngesikhathi se-COVID-19
Kunezindlela eziningi amabhizinisi angahamba ngazo ekukhuthazeni nasekuthengiseni imikhiqizo nezinsizakalo zawo, indlela eyodwa okufanele icatshangelwe ukumaketha kwesikhathi sangempela, ikakhulukazi ngoba kuyindlela ehlakaniphile yokuthi abathengisi kufanele baphendule kanjani kwiCoronavirus.
Kusuka kusibonelo esingenhla nokwethula incazelo ejulile, ukumaketha kwesikhathi sangempela isenzo senkampani ephendula ngokushesha kumcimbi wamanje ngesitatimende, ukuphawula, noma isenzo ngenhloso yokuthola ukubonakala, ithrafikhi, noma ukuthengisa.
Imibiko ikhombisile ukuthi idatha yesikhathi sangempela ingenye ye- top 3 izindlela abathengisi abathe zithuthukisiwe futhi zengeza inani kumasu abo. Manje njengoba i-COVID-19 ikhona ezimpilweni zethu ngekusasa elibonakalayo, ukufaka ukumaketha kwesikhathi sangempela phakathi kwenhlekelele isu lakho lebhizinisi kungathuthukisa ubudlelwano phakathi komkhiqizo wakho nabalandeli, futhi kukhulise nesithunzi senkampani yakho.
Ngokuqondile, izinkampani ezinkulu bezilokhu zivuna izinzuzo ze- ukumaketha kwesikhathi sangempela ikakhulu ngenxa yobukhona obukhulu asebenabo ezweni ledijithali. Lapho ibhizinisi elinjengalokhu likhipha umlayezo ngokuphendula kumcimbi noma inkinga yamanje, izethameli zalo ezinkulu zinamandla okwabelana ngomlayezo nabalandeli bazo, zizonke zisiza lezi zinkampani ukuthi zikhulise ukufinyelela kwazo kude kakhulu kunalokho okuvele kunakho ngokwemvelo ngendlela.
Ukuphendula lokhu, amabhizinisi amancane kufanele afunde ukunamathela kulezi zindlela zezinkampani ezinkulu, noma kungaba ngendlela yokuphawula kokuthunyelwe kwabo noma ukwaba kabusha okuqukethwe kwabo njengendlela yokuheha izinkampani ezinkulu izilaleli ezikhona kuzingxenyekazi zakho.
Amathiphu Okumaketha Okwangempela
Ngokuvamile kulula ukuthi izinkampani ezinkulu zenze impumelelo amasu wokukhangisa wangempela ukunweba ukufinyelela kwabo ngezithameli esezivele zikhona, kuyilapho amabhizinisi amancane ezodinga ukuthatha izindlela ezahlukahlukene zokusiza ukuzikhuthaza. Ngokuhambisana nokufunda nokulandela izindlela ezidalwe ngamabhizinisi asunguliwe, ngezansi kunedlanzana lamathiphu okufanele uwacabangele lapho udala isu lakho lokuthengisa lesikhathi sangempela lebhizinisi lakho elincane:
Qapha - Umzuzu owodwa umcimbi ungaba ohamba phambili bese olandelayo usuvele wehlele phansi. Inkampani yakho izodinga ukuthi iqaphe kakhulu uma ifuna ukwenza ngempumelelo ukumaketha kwesikhathi sangempela. Lokhu kungafaka ukusetha izexwayiso ze-Google noma amanye amapulatifomu ezaziso zezindaba kuzihloko ezithile ibhizinisi lakho elingafuna ukuzihlanganisa. Lokhu kuzosiza umkhiqizo wakho ukuthi ube ngowokuqala ukwaziswa ngezimo ezintsha kanye nokwenzeka. Enye indlela kungaba ukulandela abagqugquzeli noma ezinye izinkampani emkhakheni wakho ezizobe zihlanganisa izihloko ezifanayo nebhizinisi lakho. Uma ungakwazanga ukuthola izindaba zakamuva, kungenzeka ukuthi othile omlandelayo uzokwenza kanjalo; futhi usazoba nethuba lokwenza ngokushesha ngecebo lakho lokumaketha.
Yiba Nezinsizakusebenza - Inkampani yakho enezinsizakusebenza ezilungisiwe ihlakaniphile lapho ikhangiswa ngesikhathi se-COVID-19. Kungaba nzima kakhulu ngokuziphatha kwabathengi okuguquguqukayo njalo ekuphenduleni lezi zinkinga, kepha ukuba nokuqukethwe okulungele ukuhamba kuzosiza ukufeza isu lakho lokukhangisa lesikhathi sangempela, njengoba kuboniswe u-Oreo phambilini.
Zibandakanye - Uma inkampani yakho ithatha isinqumo sokubamba iqhaza ekumaketheni kwesikhathi sangempela, kufanele futhi ukulungele ukuzibandakanya nezethameli zakho okungenzeka ziphendule futhi zisabele kokuqukethwe kwakho. Isibonelo, uma ibhizinisi lakho linquma ukudala iposi lokuthi ulusingatha kanjani lolu bhubhane lwamanje kanye nezinyathelo zokuphepha ezikhona, kufanele futhi ulungele ukuphendula imibuzo yabathengi maqondana nezitatimende zakho ngoba lokhu kuzodala ukwethembana phakathi komkhiqizo wakho namakhasimende.
Thola Ubunikazi - Ngaphandle kwe-COVID-19 ethinta i-eCommerce ngenkathi iqala, manje sekuyisikhathi sokuba amabhizinisi azenzele ubuciko futhi ahlele amasu amasha afana nalawa ukusatshalaliswa kokuqukethwe kwamavidiyo ukuheha abathengi. Izinkampani manje sezinethuba lokukhombisa ubuntu bazo futhi zifinyelele kubathengi ezingeni elijulile. Noma ngabe kwenziwa ihlaya elinobuhlakani noma uzwelana nenkinga, ukudala izwi lomkhiqizo wakho kungaxhuma nezethameli zakho.
Amabhizinisi kudingeka acabangele lawa macebiso lapho akha amasu awo ebhizinisi. Kufanele futhi bazi izinselelo ezihambisana nale ndlela ngoba ukumaketha kwesikhathi sangempela ngesikhathi se-COVID-19 kungaba nzima ukukwenza ngaphandle kokuphendula okusheshayo, idatha etholakalayo, nolwazi oluqinisekisiwe ngesihloko.
Abathengi, ngenxa yalokho, bagcine belahlekelwe ukwethembeka nokwethembeka kumikhiqizo ekhiqize okuqukethwe okunganembile ezindabeni ezibucayi. Umkhiqizo wakho udinga ukwenza ucwaningo olunembile ngaphezulu kokukhiqiza ngokushesha okuqukethwe uma befuna isu labo liphumelele.
Idatha Yesikhathi Sangempela Ibalulekile
Izibalo ezintsha nemininingwane iphuma nsuku zonke maqondana ne-COVID-19, ihlale inika amabhizinisi ithuba lokusebenzisa amasu wangempela wokukhangisa. Lesi yisimo esibucayi izinkampani okufanele zingasinaki ukusiza ukwakha ubudlelwano nezithameli zazo ezingakwazi ukuhlala isikhathi eside emuva kokuba imiphumela isinciphile. Ekuphetheni, ukumaketha kwesikhathi sangempela okwenziwe kahle ekugcineni kungaholela emiphumeleni emikhulu phakathi kwalesi simo esiseduze.
Tags: i-covid-19ukumaketha kwamathonyaamathiphu wokuthengisaOreoidatha yesikhathi sangempelaukumaketha kwesikhathi sangempelaamasu wokukhangisa wangempelasocial mediaTwitter
UHannah O'Brien ubhalela i-ejensi yezentengiso yedijithali I-Aumcore, egxile ekwenzeni isipiliyoni sokuqala sedijithali esibhangqwe necebo lokumaketha lokuqukethwe okuphezulu.
I-Oribi: I-No-Code Marketing Analytics Ngezimpendulo Ozidingayo Ukukhulisa Ibhizinisi Lakho